ပထမ၊ ဒုတိယနေရာဆိုတာကို သိပ်မကြည့်ဘူး လုပ်ကွက်ရမယ့်ကားဆို လက်ခံတယ် ဝါဆိုမိုးဦး
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 17 April 2012	Q. အခုလတ်တလော ဝါဆိုရိုက်ဖြစ်နေတဲ့ ဇာတ်ကားတွေဆိုရင် A. ခု ဝါဆိုက ကိုဘုဏ်းမြတ်၊ မခိုင်သင်းကြည်တို့နဲ့ ဒါရိုက်တာ ကိုဇော်(အာရုဏ်ဦး) ရိုက်တဲ့ ကားရယ်၊ နောက် ကိုအောင်ရဲလင်း၊ ကိုမင်းဦးတို့နဲ့ ခရေဖြူကရိုက်တဲ့ ကားတစ်ကား ရိုက်ကူးနေပါတယ်။ အဲ့ဒီမတိုင်ခင် ဦးကုသိုလ်ရိုက်တဲ့ ကားမှာ ကိုနိုင်းနိုင်း၊ မမေကဗျာတို့နဲ့ အတူ သရုပ်ဆောင်ခဲ့သေးပါတယ်။
Read more...	အောင်မြင်ကျော်ကြား အနုပညာရှင်များရဲ့ လျှို့ဝှက်စကား ဝင့်ဒါလီ
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 15 April 2012	မေး - သူငယ်ချင်းတွေပေးထားတဲ့ လျှို့ဝှက်နာမည် ဖြေ - Candy
မေး - ကိုယ်ချစ်တဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ပေးထားတဲ့ လျှို့ဝှက်နာမည် ဖြေ - ဂိုရာ
Read more...	အောင်မြင်ကျော်ကြား အနုပညာရှင်များရဲ့ လျှို့ဝှက်စကား နန်းမြတ်ဖြိုးသင်း
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 13 April 2012	မေး - သူငယ်ချင်းတွေပေးထားတဲ့ လျှို့ဝှက်နာမည် ဖြေ - ပိုးဟတ်ဖြူလို့လည်း ခေါ်ကြတယ်။ ကိုယ်ကနေမကောင်း ဖြစ်တတ်လို့လေ။
မေး - ကိုယ်ချစ်တဲ့ တိရစ္ဆာန်လေးတွေကို ပေးထားတဲ့ လျှို့ဝှက်နာမည် ဖြေ - တီအားမိုလို့ ခွေးလေးကိုပေးထားတယ်။
Read more...	ဒီလောကထဲမှာ ကိုယ့်အသိ မိတ်ဆွေတွေလည်း တစ်ယောက်မှ မရှိဘူး ပိုက်ဆံလည်း မရှိဘူး သူထူးစံ
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 11 April 2012	Q. အနုပညာအလုပ် မလုပ်ခင်က ငယ်ဘဝ အိပ်မက်က ဘာလဲ။ A.ငယ်ငယ်တုန်းက နယ်မှာနေတာဆိုတော့ ရန်ကုန်လောက် အမြင်မကျယ်သေးဘူးပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမဲ့ ၁၀ တန်းအောင်ရင် ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တော့ ရှိတာပေါ့။ ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာက Pilot ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပေါ့။ခရီးစဉ်ပို့တဲ့ Pilot မလုပ်ချင်ဘူး။ တိုက်လေမောင်းတဲ့ Pilot ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပေါ့။
Read more...	အောင်မြင်ကျော်ကြား အနုပညာရှင်များရဲ့ လျှို့ဝှက်စကား နှင်းထက်ထက်ဝေ
Category: စတားများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း	Published: 05 April 2012	မေး - သူငယ်ချင်းတွေပေးထားတဲ့ လျှို့ဝှက်နာမည်ဖြေ - Tweety (တွစ်တီ) လို့ခေါ်ကြတယ်။ ငှက်ကလေးနဲ့တူလို့တဲ့။
မေး - လျှို့ဝှက်ထားတဲ့ အမူအကျင့် ဖြေ - လူကြားထဲရောက်ရင် နှာခေါင်းနှိုက်ချင်တယ်။ မကောင်းမှန်းသိပေမဲ့ လုပ်မိတယ်။
Read more...	အရမ်းရှက်တတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ဒီသရုပ်ဆောင်အလုပ်ကို ဖြစ်မယ်လို့ လုံးဝမထင်ထားဘူးဆိုတဲ့ ချောရတနာ
ကျောင်းဆရာမလည်း ဖြစ်ချင်တယ် ဆရာဝန်လည်း ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့ သင်ဇာဝင့်ကျော်
ကိုယ်ဖြစ်စေချင်တာထက် သူဖြစ်ချင်တာကို အားပေးလိုက်ရင် ပိုပြီးထူးချွန်တဲ့လူဖြစ်လာမှာပါဆိုတဲ့ မင်းဦး
အောင်မြင်ကျော်ကြား အနုပညာရှင်များရဲ့ လျှို့ဝှက်စကား ခိုင်လေး(URANIUM)
ဆယ်တန်းနှစ်မှာ အဖေဆုံးပါးသွားခဲ့တော့ မိုးပြည့်ရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်လဲ ပြောင်းလဲသွားခဲ့တာ မိုးပြည့်ပြည့်မောင်
Start Prev234567 8910 11 Next End Page7of 79